Anio alatsinainy 6 mey 2019 amin’ny 6 ora maraina no hanomboka ny fampielezan-kevitra ho amin’ny fifidianana ho solombavambahoaka hotontosaina ny 27 mey izao.
Ny 25 hifoha 26 mey, izany hoe, misasakalina kosa no hiafarany. Araka izany dia mifanontona tanteraka amin’ny fankalazan’ny mpino Silamo ny Ramadany ity propangandy indray mitoraka ity. Ny Ramadany moa izay fotoana natokan’ireo mpino Silamo hifadian-kanina sy handinihan-tena kanefa hanehoana ny fitsinjovany ny mpiara-belona ihany koa amin’ny alalan’ny fanaovana asa sosialy isan-karazany. Samy hanomboka rahampitso avokoa ireo ary samy hiara-kameno ity volana mey ity. Iza avy indray ireo kandida mbola hanohy hatrany ny tolotolotra isan-karazany. Mety hifangaro izany ny asa masina sy ny fanjonoana mpifidy.